ए डिभिजन लिग : आज दुई खेल हुँदै, कसको भिडन्त को सँग ?
काठमाडौं । सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको दोस्रो चरणका खेल आजबाट सुरु हुँदैछ। दोस्रो चरणको पहिलो दिन दुई खेल हुनेछन् । दिउँसो १ बजे सुरु हुने खेलमा नवप्रवेशी सातदोबाटो युथ क्लबले थ्रीस्टार क्लबविरुद्ध खेल्नेछ।
लिगमा सातदोबाटो पहिलो जितको खोजिमा छ। यसअघि सातदोबाटोले पहिलो खेलमा ललितपुर प्रतिद्वन्द्वी फ्रेण्ड्स क्लबसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। मानबहादुर तामाङको कप्तानीमा रहेको सातदोबाटोलाई दुइ विदेशी खेलाडीको साथ रहेको छ।
पहिलो खेलमा छिमेकी च्यासल युथ क्लबविरुद्ध ३–० को सहज जित निकालेको थ्रीस्टार सातदोबाटोविरुद्ध उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रनेछ। राष्ट्रिय टोलीका २ खेलाडीको साथ पाएको थ्रीस्टार डिफेण्डर विक्रम लामाको कप्तानीमा जारी लिगमा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा छ। थ्रीस्टारलाई तिन विदेशी खेलाडीको साथ रहनेछ।
साझ पौने ५ बजे हुने दोस्रो खेलमा संकटा क्लबले फ्रेण्ड्स क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुबै टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन्।
रवि सिलवालको कप्तानीमा रहेको संकटाले पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पासँग १–१ गोलको बराबरी खेलेको थियो। यता, फ्रेण्ड्स समेत पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। फ्रेण्डस् उद्घाटन खेलमा नव प्रवेशी सातदोबाटोसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो।
गर या मरको अवस्थामा बार्सिलोना, बायर्नसँग ११ पटक आमनेसामने हुँदा यस्तो छ अवस्था
मेसीको प्रशंसा गरेर थाकेनन् एमबाप्पे, के–के भने ?
ए डिभिजन लिग : आज २ खेल हुँदै
मेसी र एमबाप्पेले पिएसजीलाई जिताए